Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » VP vaovao momba ny varotra nambaran'ny iN2L
iN2L, mpanome vahaolana amin'ny fifandraisana nomerika manokana ho an'ny zokiolona, ​​​​dia mirehareha manambara ny fanampian'i Tim Jones ho VP of Sales vaovao. Amin'ny andraikiny, i Jones dia hanao tatitra amin'i Lisa Taylor, Tale Jeneralin'ny iN2L, hitarika ny paikadin'ny varotra miompana amin'ny fitomboan'ny fikambanana ary hanampy amin'ny fampitana ny tombam-bidiny maharitra amin'ny tsenan'ny zokiolona midadasika kokoa.
"Faly izahay mandray an'i Tim ho ao amin'ny ekipa raha manohy ny iraka hanatsara ny traikefan'ny fahanterana izahay," hoy i Taylor. "Amin'ny maha-mpitarika ny tsena amin'ny vahaolana amin'ny fifampiraharahana amin'ny zokiolona, ​​​​dia mila mpitarika ara-barotra mavitrika sy mibanjina toa an'i Tim izahay mba hampiditra anay amin'ny dingana manaraka amin'ny fitomboana. Ny fahaiza-manaony lalina amin'ny fampandehanana ny fomba fivarotana stratejika dia ho sarobidy amin'ny iN2L. ”
Tim dia mitondra traikefa 20 taona mahery amin'ny varotra teknolojia momba ny fahasalamana ho an'ny iN2L. Ny paikadiny mivelatra amin'ny varotra dia mifantoka mitovy amin'ny fampivoarana ny fandraharahana vaovao mipoaka, sady mamolavola ny fitantanana kaonty mavitrika sy ny programa fitazonana mpanjifa. Vao haingana, amin'ny maha-VP an'ny Enterprise Sales ao amin'ny Relias, Tim no nanara-maso ny drafitry ny fampandrosoana sy ny paikady maharitra.
"Amin'ny ampahany noho ny areti-mifindra, ny ampahany noho ny fiovan'ny fahatsapana, ny tsenan'ny zokiolona dia ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fanavaozana sy ny flux tsy mampino," hoy i Jones. “Be dia be ny mety hisian'ny fitomboana - indrindra fa ny fomba ahafahan'ny vahaolana amin'ny fifampiraharahana dizitaly mampivelatra fifandraisana bebe kokoa, fahafaham-po ary mahasoa eo amin'ireo mponina ao amin'ny vondrom-piarahamonina. Voninahitra ho ahy ny manampy amin'ny fampitomboana ny fahafahan'ny iN2L rehefa manavao fomba vaovao hikolokoloana fifandraisana manan-danja sy fahafaham-po manokana eo amin'ireo zokiolona eto amintsika izy ireo.
Miaraka amin'ny fanantitranterana ny famoronana sanda marina, ny filozofian'ny varotra an'i Jones dia miorim-paka amin'ny fanaterana ny fampiharana mitohy, ny dingana ary ny fanatsarana ny fifandraisana. Ny fomba fiasany dia mifantoka amin'ny fampiasam-bola amin'ny fifandraisana manokana matanjaka, indrindra eo amin'ny toeran'ny mpanjifa, ny fahombiazan'ny mpanjifa ary ny varotra.
“Mametraka ny laharana ambony i Tim. Ny tanjany dia miankina amin'ny fampiakarana ny ekipany ho amin'ny fahombiazana ambony kokoa, "hoy i Taylor. "Tsy andrinay ny hahita ny fomba ahafahan'ny fahaiza-mitarika miavaka ananany mampitombo ny fahafahanay manolotra traikefa amin'ny mpanjifa vaovao."